Our News Crewनायीका आँचल र डा. उदिपको विवाहमा करोडौं खर्च, ह्यातमा भव्य रात्रिभोज - Our News Crew
२०७६ चैत्र १, शनिबार १०:३०
काठमाडौं, चर्चित नायिका आँचल शर्मा विवाह बन्धनमा बाँधिएको आजभोली निक्कै चर्चामाछ । पेशाले चिकित्सक रहेका डा. उदिप श्रेष्ठसँगको करिब दुई वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धलाई उनले वैवाहिक जीवनमा परिणत गरेकी हुन । काठमाण्डौको बुढानिलकण्ठस्थित् पार्क भिलेज रिसोर्टमा भव्य समारोहका बीच उनीहरुको विवाह सम्पन्न भएको थियो ।निकै तामझामका साथ विवाह सम्पन्न भएको थियो । आँचललाई उनका पतिले करोडौंका गरगहनासमेत उपहार दिएकोबारे अहिले नेपाली फिल्म ईण्डष्ट्री तातेको पनी छ । कतिसम्म भने उक्त विवाह समारोहमा सहभागी भएकाहरु नै तामझाम देखेर तीन छक्क परेका थिए । चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल ४’बाट चलचित्र क्षेत्रमा उदाएकी यी सुन्दरी म्यूजिक भिडियोको दुनियाँमा अझ बढी सफल मानिन्छिन् । आँचल र उदिपले शनिवार आयोजना गरेको रात्री भोजमा भिआईपीदेखि चलचित्रकर्मीहरु सबलाई निम्ता गरिएको छ ।
उनीहरु साँझ आयोजना गरिने भोजमा भने हेलिकप्टरबाट उत्रिने कार्यक्रम समेत तय भएको स्रोतको दाबी छ । कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण सरकारले पनि अहिले कुनै ठूलो संख्यामा सभा, भोज, भतेरको आयोजना नगर्न आहवान गरेको छ ।
आँचल विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि उनको नाम नायक पल शाहसँग जोडेर धोका दिएको भन्दै पलका फ्यानहरुले सामाजीक सञ्जालमा गालीसमेत गरेको भेटिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत यसबारे चर्को बहस भैरहेको छ । कतिसम्म भने विवाह बन्धनमा बाँधिएलगत्तै आँचलले पललाई सामाजिक सञ्जालबाट समेत अनफलो गरेका समाचार बाहिर आएका छन् ।
हुन त आँचलले पलशसँग चलचित्र र धेरै म्युजिक भिडियामा संगै काम गरेकै आधारमा फ्यानहरुले उनीहरुका बीचमा प्रेम सम्बन्ध थियो भनेर अनुमान गरेको तर बास्तविकमा उनीहरुबीच कुनै प्रेम सम्बन्ध नभएको बताईन्छ । स्वयम, आँचलले समेत यो कुरा स्पष्ट पारिसकेकी छिन् । तस्विर : वेडिंग ड्रिम्स नेपाल